म्याक्रोन: "आतंकवादको बिरूद्ध लड्न हामीले मौसम परिवर्तन समाधान गर्नुपर्नेछ" | नेटवर्क मौसम विज्ञान
म्याक्रोन: "आतंकवादसँग लड्न हामीले मौसम परिवर्तन सुल्झाउनु पर्छ"
फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले यो आश्वासन दिएका छन् आतंकवादसँग लड्न हामीले मौसम परिवर्तन पनि अन्त्य गर्नुपर्दछ। यो सम्भव छ कि एक भन्दा बढिले उसको टाउकोमा हात राख्यो। फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले यो अवस्था रहेको आश्वासन दिएका छन्। फ्रान्स हाल एक देश हो जुन मौसम परिवर्तन अन्त्य गर्न सबैभन्दा बढी प्रयास गरिरहेको छ। तर यसले आतंकवादसँग के गर्ने? के तपाई केहि गलत बुझिरहनु भएको छ, वा अरुले केहि गलत बुझ्नु भएको छ?
म्याक्रोन आश्वासन दिन्छ कि सम्बन्ध धेरै नजिक छ। उसले यसलाई निम्न अनुसार परिभाषित गर्दछ। "हामी मौसम परिवर्तनमा दृढ स without्केत नगरी आतंकवादको बिरूद्ध लड्न सक्दैनौं, वा चाड, नाइजर र अन्यत्र बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई मौसम परिवर्तन कुनै समस्या होइन भनेर बुझाउनु आवश्यक छ।" यो स्थिति दिएर, उनले आश्वासन दिए कि यी समस्याहरू बिभिन्न कारणहरूको लागि उपचार गर्न सकिँदैन। धेरैजसो अफ्रिकामा हुन्छ र मौसम समस्याहरू औद्योगिक प्रक्रियाहरू र हाम्रो उत्पादन विधिहरूबाट आउँदछन्। त्यसो भए अफ्रिका, मौसम र औद्योगिक विकासलाई उस्तै चीज मान्नु पर्दछ।
1 म्याक्रोनले यी निष्कर्षहरू पुष्टि गर्न के प्रयोग गर्दछ?
2 देशहरू जो जलवायुबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेका छन्
म्याक्रोनले यी निष्कर्षहरू पुष्टि गर्न के प्रयोग गर्दछ?
मा पछिल्ला रिपोर्टहरू जुन पछिल्लो दुई बर्षमा आउँदैछ। सबैभन्दा राम्रो, जर्मन विदेश मन्त्रालय द्वारा कमीशन भएको «उग्रवाद, आतंकवाद र तापक्रमको मौसममा संगठित अपराध"।
यो प्रतिवेदन, अन्य जस्तो नभई, ठोस परिस्थितिहरूको विवरण दिन्छ जहाँ जलवायु समस्याहरू क्षेत्रका मानिसहरूसँग धेरै नजिकबाट सम्बन्धित छ। सामाजिक अशान्ति, मौसम शरणार्थी, क्षेत्र खडेरी, आदि। मौसमको समस्याहरूको यस ठूलो संचयले जनस solutions्ख्यालाई समाधान खोज्न र प्रायः अन्य क्षेत्रमा बसाई सर्छ। उदाहरणका लागि तथाकथित जलवायु शरणार्थीहरू। त्यसकारण म्याक्रोनको भनाइ बेतुका लाग्दैन, यो पूर्ण अर्थले छ। तपाईं आतंकवादलाई आक्रमण गर्न सक्नुहुन्न र अन्तमा व्यक्तिहरूलाई भन्नुहोस् कि उनीहरू आफ्ना देशहरूमा फर्केर जान सक्छन्।, जब यो समस्या वास्तवमै अझै अवस्थित छ।
यी सबैको लागि, म्याक्रोनले यी सबै समस्याहरू बराबरको रूपमा सम्बोधन गर्नु पर्ने आश्वासन दिन्छ, र पहिले नै नयाँ शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको छ। पेरिसमा G20 यस अर्को डिसेम्बर १२ को लागि.
यसले समस्या र प्रतिबद्धताहरूको सामना गर्दछ जुन देशहरूले मौसम परिवर्तनको बिरूद्ध लड्नैपर्दछ। ह्याम्बर्गमा पछिल्लो शिखर सम्मेलनको क्रममा म्याक्रोनका लागि यो नयाँ कुरा होइन, उहाँप्रति प्रतिबद्धता धेरै पहिले नै रहेको छ। यहाँसम्म कि अमेरिकाबाट ईन्जिनियरहरू र वैज्ञानिकहरूलाई यी विश्वव्यापी समस्याहरू समाधान गर्न फ्रान्स जान आमन्त्रित गर्दै।
देशहरू जो जलवायुबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेका छन्
सब भन्दा कमजोरसँग हामीसँग स्पष्ट प्रमाण छ कि अफ्रिकामा, जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण जोखिमपूर्ण सूचकांक चिन्ताजनक छ। म्याक्रोनले भनेका देशहरू, चाड र नाइजर दुर्घटनामा छैनन्, तर तिनीहरू पनि टाढा देशहरू छैनन्। राम्रो सेट उनीहरूसँग हुनेछ र पहिले नै गम्भीर समस्याहरू छन्। कo्गो गणतन्त्र, युगान्डा, दक्षिण सुडान र सुडान, माली, माडागास्कर, सिरिया र केन्या, केहि सबैभन्दा जोखिममा छन्।
हामीले यी सबै बढ्दो समस्याहरूलाई रोक्नु पर्छ। अन्यथा, बसाई जारी रहनेछ, र आतंकवाद मात्र पर्याप्त छैन। समस्या अन्त्य हुँदैन।
चाड तालमा एउटा महत्वपूर्ण र धेरै प्रतिनिधि मामला देख्न सकिन्छ। १ 1963 .2009 पछि, यो बिस्तारै सुख्खा भएको छ र लगभग अब यो व्यावहारिक रूपमा सुक्खा छ। २०० In मा, बोको हरामले इस्लामिक स्टेट निर्माण गर्न हतियार उठायो। त्यसबेलादेखि २०,००० भन्दा बढी मानिस मरेका छन्। २ 20.000. लाखलाई शरणको खोजीमा अगाडि बढ्नुपरेको थियो। चाड तालमा खडेरीले निम्त्याएको संकट ठूलो छ, र धेरै लामो समयका लागि बेवास्ता गरियो। संयुक्त राष्ट्र संघको अनुमान छ कि यस बर्ष मात्र आवश्यकता पूरा गर्न १ 1.500,०० भन्दा बढी मानिस चाहिन्छ।
नाइजेरियामा संयुक्त राष्ट्र संघको विकास कार्यक्रमका संयोजक सियरा लियोनका मूल निवासी एडवर्ड क्यालनन भन्छन कि समुदायले गरेको प्रतिबद्धता राम्रो सुरु हो। उही समयमा, त्यहाँ अनिकालको तत्काल जोखिम छ कि छैन भन्ने बारे मा, क्यालननले भने "अवस्था झन् झन् खराब हुँदै गइरहेको छ, राम्रो हुँदै गइरहेको छैन।"
यो अब केवल युद्ध, आतंकवादको बारेमा छैन। म्याक्रोनले कुनै बकवास दाबी गरेन। र यो यो हो कि हामीले यी समस्याहरू समाधान गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ, जहाँ त्यहाँ बस्न कम र कम क्षेत्रहरू छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » म्याक्रोन: "आतंकवादसँग लड्न हामीले मौसम परिवर्तन सुल्झाउनु पर्छ"
सौर्य न्यूनतम पृथ्वीमा कसरी असर गर्दछ?